Xildhibaan Xuseen Carab Ciise. “3-sano iyo bar kadib in aan la garaneen nuuca doorasho ee dhaceyso waa mas’uuliyad darro” - Awdinle Online
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise. “3-sano iyo bar kadib in aan la garaneen nuuca doorasho ee dhaceyso waa mas’uuliyad darro”
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo katirsan Golaha Shacabka BFS ayaa nasiib darro ku tilmaamay in saddex sano iyo bar aan la garaneyn nuuca Doorasho ee dalka ka dhaceyso ay ku eedeysan tahay Xukuumadda haatan jirta.
Xuseen ayaa intaa ku daray in Xildhibaanada oo maanta u furmay kalfadhigii ugu dambeeyay aysan garaneyn qaabka ay noqon doonto Doorashada xili ay ay meel mariyeen sharcigeeda, arrintaasina aan indhaha laga qabsan Karin.
Waxa uu soo jeediyay in la sameeyo dadaal looga hortagayo in doorashada qudheeda aysan dib ugu dhicin waqtiga uu ku dhamaanayo muddo xileedka Xukuumadda iyo Laamaha kala duwan ee Dowladda.
“Cudur daar lagama dhigi karo in Doorasho qof iyo cod ah aan loo qaban Karin sabab ka dhalatay Cudurka Covid-19, balse xaqiiqada ayaa ah in la dayacay waqti hore, Fayruska dhawaan ayaa soo shaac-baxay balse saddex sano iyo bar maxaa la qabanayay” ayuu yiri Xildhibaan Xuseen Carab Ciise.
Kalfdhiga 7-aad ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ah fadhigii ugu dambeeyay oo ay yeeshaan, waxaana soo idlaanaya muddo xileedkooda, waxyaabaha ugu badan ee horyaalla waxaa kamid ah Doorashada dalka iyo in ay dhageystaan Warbixinta Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka dhammaadka bishaan.
Previous articleGeerida Fanaankii Caanka ahaa ee Cabdi Tahliil oo Dowladda ka hadashay
Next articleColdoon oo xabsiga laga siidaayay